Izicelo ezi-4 ezinezaphulelo ezingaphezulu kwama-60% ixesha elimiselweyo | Ndisuka mac
Ii -apps ezi-4 ezinezaphulelo ezingaphezulu kwama-60% kangangexesha elimiselweyo
UMvulo udlule ngokukhawuleza okukhulu. Izolo bekubonakala ngathi izokuhlala ingenasiphelo kodwa ekugqibeleni ingathi yintonga yenaliti, ukuba siyayoyika kwaye emva koko ihlala umzuzwana kwaye ayimbi kangako. Kwaye yile ndlela size ngayo ngoLwesibini, phantse ngokuqhwanyaza kweliso ukufumanisa unyuselo olutsha esinazo kwizicelo zeMac.
Namhlanje ndikuzisela ukhetho lwe Iinkqubo ezine eziluncedo, izixhobo ezine onokubeka kuzo ubuchule bakho kuvavanyo, uya kufumana okuninzi kwikhompyuter yakho ye-Mac. Ukongeza, zonke ngesaphulelo esingaphezulu kwama-60%, izicelo zokuhlawula onokuzifumana ngoku nge-euro enye okanye ezimbini. Sukuphoswa yiyo!
1 Ukudityaniswa kweVidiyo eLiquivid
2 Umenzi we-GIF Movavi
3 Ilebhu ye-infographics ye-Keynote
4 Amanqaku eMyKeep eGcina kuGoogle
Ukudityaniswa kweVidiyo eLiquivid
Saqala nge «Liquivid Video Merge», isicelo onakho dibanisa iiklip zevidiyo zibe nye ngendlela elula. Khetha elona candelo ufuna ukulithumela kwividiyo nganye, kwaye ukhethe nengoma yesandi, kwaye masidibane! Inkqubo ngu cIyahambelana nazo zonke iifomati zevidiyo ezithandwayo kunye neekhowudi nasiphi na isisombululo, kubandakanya i-HD, 2K, kunye ne-4K. Kwaye iziphumo ezitsha zeevidiyo zithunyelwa ngaphandle ngefomathi ye-MP4 nge-H.264 codec.
Ixabiso laso eliqhelekileyo yi- € 6,99 kodwa ungayifumana nge- € 1,09 kuphela kude kube ngomso, ngoLwesithathu, Okthobha 4, ezinzulwini zobusuku.
Umenzi we-GIF Movavi
Siyaqhubeka nge «GIF Maker Movavi», isicelo esele sikuxelele ngaso ngamanye amaxesha kwaye ngoku sikunika ithuba elitsha lokuyifumana ngesaphulelo esikhulu.
Nge «GIF uMenzi Movavi» unako yenza i-GIFS yakho ngokukhawuleza nangokulula usebenzisa iimuvi, iividiyo zomculo, imiboniso okanye enye into onayo kwiscreen sakho seMac.Ngoko ungabelana ngee-GIFS zakho kwinethiwekhi yoluntu, nge-imeyile, imiyalezo, ukongeza kwimiboniso yakho, njl.
Ixabiso laso eliqhelekileyo lidlula i-euro ezilishumi elinesihlanu kodwa ngoku ungayifumana nge- € 2,29 kuphela Kude kube ngomso, ngoLwesithathu we-4 ka-Okthobha ezinzulwini zobusuku.
Ilebhu ye-infographics ye-Keynote
Kwaye sigqiba nge «I-infographics Lab ye-Keynote», esinye isixhobo esele sikuxelele ngaso Ndisuka mac ke, ukuba uphoswe yinyuselo yangaphambili ngenxa yokuba ungafikanga ngexesha, ngoku unethuba elitsha lokuyifumana ngexabiso elimangalisayo.
"ILebhu ye-infographics ye-Keynote" yi Ukuqokelelwa kwamawaka ezinto ezinokukunceda ukutyebisa intetho yakho eyenziwe nge-Keynote, Uhlelo lokusebenza lomenzi weApple lubandakanyiwe kwiWork. Ibandakanya izinto kuwo nawuphi na umxholo (iitshathi, iidayagramu, iimephu ezinokuthintelwa zezixeko, amazwe, amazwe kunye nemimandla, iiflegi nokunye.
Ukongeza, yonke imifanekiso ebandakanyiweyo kule ngqokelela yile kwimvelaphi ebonakalayo ukuze ukwazi ukuyibeka ngaphandle kobunzima kulo naluphi na uhlobo lwemvelaphi, wawo nawuphi na umbala, okanye nawuphi na omnye umfanekiso.
"Ilebhu ye-infographics ye-Keynote" sisixhobo esenzelwe ukuba sisetyenziswe kunye ne-Keynote, kodwa unokufaka isicelo kumaphepha, amanani, i-iBooks Author kunye nezinye izicelo.
Ixabiso laso eliqhelekileyo lingaphezulu kwama-euro angamashumi amabini kodwa ngoku ungayifumana nge- € 2,29 kuphela Kude kube ngomso, ngoLwesithathu we-4 ka-Okthobha ezinzulwini zobusuku.
Amanqaku eMyKeep eGcina kuGoogle
Kwaye ukuba usebenzisa iGoogle Gcina njengesixhobo esiqhelekileyo senqaku, nangona ndingasifumani isizathu sayo, "Amanqaku AmyKeep eGoogle Gcina" aya kukufanela nesikhuselo kuba umthengi ongekho semthethweni kuGoogle Gcina kwi-Mac yakho.
Ukungabikho kwesicelo esisemthethweni, ukusebenzisa iGoogle Gcina kwisikhangeli ayisiyiyo eyona nto ilungileyo. Nge «MyKeep Amanqaku eGoogle Gcina» unako Sebenzisa iGoogle Gcina ngokukhawuleza nangokufanelekileyo ukujonga amanqaku, ukwenza amanqaku amatsha, ukuhlela amanqaku nayo yonke le nto ineendlela ezimfutshane ezinqumlayo okanye kwiwijethi yedesktop, ibha yemenyu
"Amanqaku eMyKeep eGoogle Keep" anexabiso eliqhelekileyo le-5,49 euro kodwa ngoku ungayifumana nge- € 2,29 kuphela Kude kube ngomso, ngoLwesithathu we-4 ka-Okthobha ezinzulwini zobusuku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Ii -apps ezi-4 ezinezaphulelo ezingaphezulu kwama-60% kangangexesha elimiselweyo
Yenza naluphi na uxwebhu lweOfisi ngale pakethe yasimahla yeetemplate
IVLC 3.0 isendleleni: iphucula ngaphakathi, kodwa kufuneka iphucule ujongano lwayo